Yann Barthes သည် TMC ကိုအော်ငေါက်။ ၊
By နေပြည်တော် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ် အောက်တိုဘာ 12, 2020
ဒီကြာသပတေးနေ့er အောက်တိုဘာလတွင် Yann Barth သည် UTghur များနှင့် ပတ်သက်၍“ Quotidien” ဆောင်းပါးဖြင့် TNT နှင့် TMC ခေါင်းဆောင်မှုကိုအပြည့်အ ၀ အာမခံခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်မှုများ၏သားကောင်များဖြစ်သည်။
1 သူ၏ "Quotidien" သည်er ပြီးခဲ့သည့်အောက်တိုဘာလတွင်တရုတ်အမျိုးသားနေ့ Yann Barthèsသည်တရုတ်သို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သတင်းထောက်ပြောခွင့်နှင့်သတင်းပေးခွင့်ရရန်အခွင့်အလမ်း ဥဂါးရ်ှဝန်းကျင်ရှိလှူဒါန်းမှုလှိုင်းအပေါ်အကျိုးဆက်များ.
အမှန်မှာဥဂါးရ် ၆၀,၀၀၀ ကျော်သည်တရုတ်ရှိချွေးတပ်စခန်းများတွင်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခံရသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်စနစ်၏သားကောင်ဖြစ်သည့်မွတ်စ်လင်မ်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုရှိသည်။ အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေရသောRaphaël Glucksmann သည်ပြင်သစ်ရှိအခြေအနေကိုလူသိရှင်ကြားဖော်ပြရန်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သူကိုယ်တိုင်ကြားသိစေရန်နှင့်ဒီကိစ္စကိုကာကွယ်ရန်“ နေ့စဉ်” အစီအစဉ်တွင်ပြုလုပ်လိုခဲ့သည်။
Paul Biya ၏တူနှင့် Calixthe Beyala ၏ဆုတ်ယုတ်မှုများ
Michel Gohou ကဤအဆင့်ဖြင့်ပတ္တူကိုလှန်သည်။
Kim Kardashian သည် 'ဇိမ်ကျ' သောမွေးနေ့ခရီးတွင်ဝမ်းကွဲဝမ်းနည်းစွာဖြင့်…
ဘတ်: Emmanuel-macron-multiplies-the-escapades-to-the-outings-discover-the-နောက်ဆုံး-to-date ဖြစ်အောင် /
သူကဤသို့ရေးသားခဲ့သည် -“ ဥဂါးရ်လူမျိုးများအဖို့အလွန်ဝေးကွာလွန်းသည်ဟုထင်ရသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်းဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားစည်းရုံးခြင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအားရှုံ့ချသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောကမ္ဘာအမျိုးအစားအပေါ်တွင်လည်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာကြီးကိုငါတို့လိုချင်တာလား နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီများသည်အလုပ်သမားများအသုံးပြုကြသည် ဥဂါးရ်ကို ကုမ္ပဏီ ၈၃ ခုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့သည်။
ဥဂါးရ်ဥရောပတက္ကသိုလ်ဥက္ကpresident္ဌ Dilnur Reyhan ကဤအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏ပထမဆုံးသောသားကောင်များမှာအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သူမ၏အဆိုအရဥဂါးရ်အမျိုးသမီးများကိုတရုတ်အစိုးရအရာရှိများကအဓမ္မပြုကျင့်သည်။ ဒါ့အပြင်တော်လှန်ရေးအလှအပစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့ပိုးကင်းအောင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွေကိုလည်းသူတို့အပေါ်မှာချမှတ်ထားတယ်။
Yann Barthès, မကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှု? သူကအမွေးအရွက်။
ဤထုတ်ဝေသည်ဥဂါးရ်များအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုဖြင့်“ Quotidien” ၏ဒုတိယအပိုင်းသည်ပြင်သစ်လူမျိုး ၁.၆၁ သန်း၊ ပရိသတ် ၆.၆% သောစက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ သို့သော်ရုပ်သံလိုင်းက၎င်း၏ပြိုင်ဘက် TNT ထက်ကျော်လွန်ခဲ့သည်။
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.cuisineza.com တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်
TMC သည်မုဒိမ်းကျင့်Yann Barthes
နေပြည်တော် 1586 ရေးသားချက်များ0မှတ်ချက်များ
အန်ဂျလီနာဂျိုလီ၏မူရင်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်း - ဗီဒီယို
ညသန်းခေါင်မှာ DJ Arafat ကိုပြန်လည်အသက်သွင်းစေလိမ့်မယ်၊
Michel Gohou ကပတ္တူစကိုဒီအဆင့်နဲ့ရွေ့သွားတယ်။
COVID ကြားတွင် Kim Kardashian သည် 'ဇိမ်ခံ' သောမွေးနေ့ခရီးတွင်ဝမ်းနည်းစွာနေခဲ့ရသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်တွင် BGR မဲပေးပြီးနောက်အခမဲ့ Krispy Kreme ဒိုးနတ်ကိုသင်ရနိုင်သည်
xnxx - ပြီးပြည့်စုံသောအောင်မြင်မှုကိုရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများမှာ…
Vanessa Paradis သည်လက်စားချေရန်၊
Ivory Coast: Guillaume Soro က ...
Angelina Jolie သည် Brad Pitt မှဗီဒီယိုကွာရှင်းပြတ်စဲရန်ဗီဒီယိုဖိုင်များပေးပို့သည်
xnxx: သင်၏ပရိုဖိုင်းကိုမထည့်ရန်အချက် (၄) ချက်ရှိသည်။
Ivory Coast: Sidiki Diakité၏နောက်ဆုံးအချိန် - လူငယ်…
သမ္မတ Emmanuel မိန့်ခွန်းမှမှတ်မိရမည့်အချက်အလက်များ ...
Brenda Biya သည် BAS ကိုထပ်မံနှိုးဆော်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
Justin Bieber သည် Chris Brown de Paliza နှင့် Rhianna y abusosa…
“ Laurent Gbagbo အိမ်ပြန်လာပြီ၊ ဘာမှပြproblemနာမရှိဘူး” (Ouattara) …